Xildhibaan katirsan Baarlamaanka Galmudug oo goordhow ku geeriyootay Muqdisho – Kalfadhi
Alle ha u naxariistee waxaa goordhow magaalada Muqdisho ku geeriyootay Xildhibaan Maryan Cali Bootaan (Maryan Munashiibiyo) oo katirsan xubnaha Baarlamaanka maamulka Galmudug. Marxuum Maryam ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay xanuun la jiiftay Isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho.
Xildhibaan C/raxmaan Cali Ciise oo katirsan Xildhibaanada Galmudug ayaa Kalfadhi u sheegay in Xildhibaan Maryam ay muddooyinkii ugu dambeeyay xanuunsaneed islamarkaana ay xaaladeeda aad u darneed maalmihii ugu dambeeyay balse ay maanta ku geeriyootay Muqdisho.
Maryam Cali Bootaan waxay katirsaneed Baarlamaanka Galmudug qaybta lagu soo dhisay magaalada Cadaado sanadkii 2015kii. Waxay aheyd Hooyo daggan oo aan ugu badneen doodaha iyo is qab qabsiga baarlamaanka.
Lama oga halka lagu aasi doono iyo goorta la aasi doono balse Xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Ciise ayaa Kalfadhi u sheegay in laga tashan doono sidii loo Aasi lahaa Marxuum Maryam Cali Bootaan oo katirsan Baarlamaanka Galmudug islamarkaana galabta ku geeriyootay Muqdisho.